Yuusuf Garaad Cumar oo maanta xilka si rasmi ah ugala wareegay C/salaan Hadliye (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Yuusuf Garaad Cumar oo maanta xilka si rasmi ah ugala wareegay C/salaan Hadliye (SAWIRO)
Wasiirka cusub ee arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa maanta xilkii kala wareegay wasiirkii hore C/salaan Xaaji Hadliye Cumar, kadib xaflad xil wareejin ah oo maanta ka dhacday xarunta wasaaradaas oo ku taallo magaalada Muqdisho.
Xafladaasi oo ay goob-joog ka ahaayeen mas’uuliyiin isugu jira diblomaasiyiin iyo shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo ay ku jiraan dibmolaamisiyiin hore ayaa waxaa xilalka ku kala wareegay wasiirka cusub iyo kii hore.
Waxaa xafladaasi sidoo kale goob-joog ka ahaa ra’iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo ay wehliyaan hanti-dhowrka guud iyo garyaqaanka guud ee dowladda Soomaaliya.
Yuusuf Garaad Cumar oo hore isku soo sharaxay tartanka doorashadda xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa looga guuleystay doorashadaasi, wuxuuna in muddo ah kasoo shaqeeyay idaacadda BBC-da laanteeda afka Soomaaliga.
Sidoo kale, Yuusuf Garaad ayaa hore loogu magacaabay madaxa joogtadda ah ergadda Soomaaliya ee u qaabilsan xarunta Qaramada Midoobay ee New York, isagoona markii dambe loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo maanta uu xilkaasi si rasmi ah ula wareegay.